Taageerada Farsamada - Chengdu Action Electronics Joint-Stock Co., Ltd.
Dareemaha sida tignoolajiyada asaasiga ah, ACTION waxay awood u leedahay inay bixiso taageero farsamo oo dhan walba ah oo ku saabsan badeecada iyo macaamiisha kala duwan ee OEM/ODM si ay kaaga caawiyaan inaad ku habboonaato suuqa deegaanka.
Alaabooyinka ACTION iyo xalalka si weyn loogu isticmaalo boqollaal waddan iyo gobollo, ayaa daboolay in ka badan 20 beeraha, Batroolka, kiimikada, daawooyinka, birta, macdanta, birta, dhirta warshadaha gaarka ah, qolalka kululeeyaha gaaska, saldhigyada buuxinta gaaska, saldhigyada xakamaynta cadaadiska, tuubooyinka isku dhafan ee magaalooyinka Waddooyinka, gaaska magaalada, guryaha, goobaha madaniga ah iyo ganacsiga, iwm. Dhammaan alaabteeda waxay ku aflaxeen imtixaankii Shiinaha National Supervision and Test Center ee Tayada Alaabta Dabka.Intaa waxaa dheer, ACTION waxay ka heshay Shahaadada Ansixinta Nooca ee Guddiga Shahaadada Dabka ee Shiinaha iyo Shahaadada CMC ee Xafiiska Kormeerka Tayada iyo Farsamada.Badeecadaha badankood waxay ku heleen shahaado CE.
Sida shirkad mas'uul ah oo leh 23 sano oo khibrad gaas ah, ACTION waxay aad u qiimeysaa lammaane, waxayna diyaar u tahay inay la koraan lammaaneheena mustaqbalka fog faa'iidooyinka wadaagga ah.Waxaad heli kartaa nidaamka qiimaha ugu fiican, taageero farsamo, adeegga ka dib oo leh tababar online iyo tababar warshad iyo wixii la mid ah.
Waxaan raadineynaa qaybiyeyaasha maxalliga ah adduunka oo dhan!Ku soo dhawoow si xor ah nala soo xiriir.
Alaarmiga gaaska gubanaya, qalabka gaaska go'an, lpg gaaska ogaanshaha, qalabka gaaska, gaaska ololi kara, Shiine gaaska baadhe,